५८७ डाक्टर यसरी फेल भए !
न्यूजअभियान | प्रकाशित मिति : २०७५ श्रावण २८ सोमबार | Patrapatrika
साउन २८, काठमाडौं । यस्तो आयो सरकारको नाममा सर्वोच्चको आदेश
सर्वोच्च अदालतले पाल्पाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी विष्णुप्रसाद ढकाललाई लुम्बिनी विकास कोषको सदस्यसचिव नियुक्त गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीको एकल इजलासले ढकाललाई नियुक्त गर्ने सरकारी निर्णय भदौ ७ सम्म कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिंदै दुबै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको हो । गत साउन १० गते मन्त्रिपरिषद्ले पाल्पाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी ढकाललाई लुम्बिनी विकास कोषको सदस्यसचिव नियुक्त गरेको थियो ।
प्रतिस्पर्धाबाट सूचीकृत व्यक्ति भन्दा बाहिरबाट नियुक्त गरिएको भन्दै अधिवक्ता शिव अर्यालले सर्वोच्चमा रिट दर्ता गएका थिए । समाचार कान्तिपुरमा छ ।
५८७ डाक्टर यसरी फेल भए
ठानिन्छ( डाक्टरहरू पढाइमा तगडा हुन्छन्। तर, लाखौं तिरेर पढेका तिनै डाक्टरमध्ये ‘लाइसेन्स’ परीक्षामा ७६ प्रतिशत फेल भएका छन्। तिनले चिकित्सासम्बन्धी काम गर्न पाउने छैनन्। डा। गोविन्द केसी चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तरलाई लिएर पटक(पटक आमरण अनशन बस्छन्। एमबीबीएस पास गरेका विद्यार्थीको हालतले त्यसलाई चरितार्थ गरेको छ।
नेपाल मेडिकल काउन्सिलले शनिबार लिएको चिकित्सक दर्ता प्रमाणपत्र ९लाइसेन्स० परीक्षामा २४ प्रतिशत मात्र पास भएका हुन्।
काउन्सिलको परीक्षामा सात सय ७६ जना एमबीबीएस अध्ययन सकेका विद्यार्थी सहभागी थिए। नौ जना परीक्षार्थी फाराम भरेपनि परीक्षामा अनुपस्थित थिए। कुल परिक्षार्थीमध्ये १ सय ८९ जनामात्र उत्तीर्ण भएको काउन्सिल सदस्य एवं प्रवक्ता डा। कृष्ण अधिकारीले जानकारी दिए। असफल हुने परीक्षार्थी स्वदेश र विदेशमध्ये कुन ठाउँ र कलेजमा अध्ययन गरेका हुन् भन्ने छुट्याई नसकिएको अधिकारीले बताए।
काउन्सिल सदस्यसमेत रहेका नेपाल चिकित्सक संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्राध्यापक डा। ढुण्डीराज पौडेलले लाखौं खर्च गरेर पढेका विद्यार्थी लाइसेन्सिङ परीक्षामा असफल भएको देख्दा आफूलाई चिन्ता लागेको बताए। उनले भने, ‘विद्यार्थीहरूमा फ्रस्टेसन आउने र गलत बाटोतिर लागेर अप्रिय घटना हुन सक्ने डर उत्पन्न भएको छ। यसमा सबै पक्ष गम्भीर हुनु पर्ने देखियो।’
त्यसयता एमबीबीएसका लागि बाहिर जाने विद्यार्थी संख्या घटेको छ। काउन्सिल अध्यक्ष प्राध्यापक डा। धर्मकान्त बास्कोटा भन्छन्, ‘योग्य र मेधावी विद्यार्थीले मात्र एमबीबीएस पढ्ने भएकाले आउँदो चार वर्षपछि लाइसेन्सिङ परीक्षामा अपेक्षाअनुरूप नतिजा हुने विश्वास लिएका छौं।’
डा। पौडेलले परीक्षार्थी फेल भए पनि काउन्सिलले परीक्षाको स्तरीयतामा सम्झौता गर्न नहुने बताए।
त्यस्तै ब्याचलर इन डेन्टल (बीडीएस) तर्फको नतिजा औसत रहेको छ। काउन्सिल प्रवक्ता डा। अधिकारीले एमबीबीएसभन्दा बीडीएस परीक्षा तुलनात्मक राम्रो भएको जानकारी दिए।
बीडीएसमा ५७ प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण भएका छन्। बीडीएसमा १ सय २७ जनाले चिकित्सक दर्ता प्रमाणपत्रका लागि परीक्षा दिएकामा ७३ जना उत्तीर्ण भएका थिए। समाचार अन्नपूर्ण पोष्टमा छ ।
मगर भाषाको साहित्यको खोजि
मगर साहित्यमा आफ्नै समाज, विषयबस्तु र संस्कृतिको प्रभाव के कस्तो छ रु हालै राजधानीमा बहस चल्यो । जीतबहादुर सिञ्जाली मगर साहित्य प्रतिष्ठानले गरेको कार्यक्रममा साहित्यमा मगरपन खोज्दै मगर भाषामा प्रकाशित कृतिहरुको समेत विश्लेषण गरियो ।
कार्यपत्रमाथि विष्णु सिंजाली मगरले टिप्पणी गरे । समाज कल्याण परिषदको सहकार्य रहेको कार्यक्रममा महिला तथा बालबालिका मन्त्री थममाया थापा मगर र नेपाल मगर संघ भाषिक उपाध्यक्ष दलबहादुर विरकट्टा मगरले पनि मगर भाषा साहित्यको प्रवर्द्धन र महत्वबारे प्रकाश पारे । समाचार कान्तिपुरमा छ ।
प्रमद्धारा मधेशको मुद्धा सम्बोधन गर्ने आस्वसन
राष्ट्रिय जनता पार्टी ९राजपा०का शीर्ष नेतासँगको भेटमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले मधेसको मुद्दा सम्बोधन गर्ने प्रतिवद्धता दोहोर्याएका छन् ।
आइतबार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा भएको भेटमा प्रधानमन्त्री ओलीले यस्तो प्रतिवद्धता दोहोर्याएका हुन् ।
‘मधेस आन्दोनलका क्रममा तपाईंहरुविरुद्ध लागेको मुद्दा फिर्ता, संविधान संशोधन लगायतका माग पूरा गर्ने तयारी भइरहेको छ’, प्रधानमन्त्रीसँगको भेटपछि उनको भनाइ उद्धृत गर्दै एक नेताले भने, ‘तपाईहरुबाट सरकारलाई अझै सहयोग र समर्थनको अपेक्षा गरिरहेको छु ।’
राजपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर, अध्यक्ष मण्डलका नेता राजेन्द्र महतो, शरतसिंह भण्डारी, महेन्द्रराय यादव र अनिलकुमार झा बालुवाटार पुगेका थिए ।
भेटमा सरकार गठनका समयमा भएका तीन बुँंदे सहमति र केही दिनअघि पेश भएको सात बुँदे मागका विषयमा छलफल भएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले राजपाका माग सम्बन्धमा सरकार गम्भीर रहेको बताएका छन् ।
भेटमा प्रधानमन्त्री ओली र राजपाका नेताबीच राजनीतिक मुद्दा फिर्ता गर्ने विषयमा समेत छलफल भएको छ । राजपा नेताले कैलाली क्षेत्र नं। १ बाट निर्वाचित सांसद रेशम चौधरी र सामाजिक व्यवस्था राज्यमन्त्री अभिराम शर्मा लगायतका नेताको मुद्दा फिर्ता गर्न माग गरेका छन् ।
भेटमा विगतमा जस्तै प्रधानमन्त्रीले सबै माग पूरा गर्ने आश्वासन दिएको अनिलकुमार झाले जानकारी दिए ।
यसअघि राजपाले साउन ३ गते प्रधानमन्त्री ओलीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै संविधान संशोधन, सांसद चौधरीलाई सांसद पदको शपथ गराउन, मधेस मुद्दलाई फिर्ता लिनुपर्नेलगायत सात बुँदे माग अघि सारेको थियो । समाचार अन्नपूर्ण पोष्टमा छ ।
नेप्से यसरी सदिन प्रतिदिन ओरालो लाग्दै
सेयर बजारको घट्ने क्रम आइतबार पनि रोकिएन । गतसाता सबै कारोबार दिन घटेको नेप्सेले आइतबार पनि सोही प्रवृत्ति पछ्याएको हो । अघिल्लो दिनको तुलनामा १६।६९ ९१।४१ प्रतिशत० ले घटेर नेप्से परिसूचक आइतबार १ हजार १ सय ६३।९४ विन्दुमा ओर्लियो । यो करिब साढे दुई वर्षयताकै न्यून हो ।
प्रदेश र केन्द्र सरकारको चुनावपछि बनेको हालको सरकार गठन भएदेखि नै नेप्से अपेक्षित रूपमा बढ्न सकेको छैन । त्यसपछिका अधिकांश दिन ऋणात्मक रहेको नेप्से थोरै दिन मात्र बढ्यो । बढेको दिनमा पनि उच्च अंकको वृद्धि देखिएको छैन । यसकारण समग्र नेप्से घट्दो क्रममा देखिएको हो । सेयर बजारका सम्बन्धमा सरकारको धारणा प्रस्ट हुन नसक्नु, बेलाबेलामा कालोधनको अनुसन्धानको चर्चा चल्नु, अत्यधिक सेयर आपूर्ति हुनु, हकप्रद तथा बोनस सेयरमा पुँजीगत लाभकर गणना विषयमा अन्योललगायत कारण सेयर बजार वृद्धिको बाटोमा हिँड्न नसकेको विज्ञहरू बताउँछन् ।
उल्लिखित विषयसँगै बैंकको ब्याजदर वृद्धि पनि सेयर बजार बढ्न नसक्नुको प्रमुख कारण भएको एक ब्रोकरले बताए । ‘अरू केही होइन, पछिल्ला दुई वर्षमा धेरै सेयर बजारमा थपिएको छ, यही समयमा तरलता अभाव भएको भन्दै बैंकहरूले ब्याजदर महँगो बनाएका छन्,’ उनले भने । पछिल्ला एकरदुई महिनायता बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निक्षेप बढ्ने क्रम बढेकाले बिस्तारै अल्पकालीन प्रकृतिका कर्जाको ब्याजदर घट्न थालेको छ । यही क्रम जारी रहे आउँदा दिनहरूमा सेयर बजारले सुधारको बाटो पछयाउने उनले दाबी गरे ।
‘दीर्घकालीन लगानीकर्ताले अहिले राम्रा कम्पनीको सेयरमा लगानी बढाउन थालेका छन्,’ उनले भने, ‘बजारमा राम्रा कम्पनीहरूको सेयर आपूर्ति घट्न थालेको छ ।’
०७२ पुस २३ गते नेप्से १ हजार १ सय ६४।१४ विन्दुमा थियो । त्यसपछि बढ्न थालेको नेप्से ०७३ साउन १२ गते हालसम्मकै उच्च विन्दु १ हजार ८ सय ८१।४५ मा पुग्यो । त्यसअघिको नेप्सेको उच्च विन्दु १ हजार १ सय ७५ अंक थियो । ०७३ साउन १३ देखि घट्न थालेको नेप्से आइतबारसम्म १ हजार १ सय ६४ मा आर्लेको हो । यो परिसूचक गत चैत १२ गते १ हजार १ सय ६८।६२ विन्दुमा थियो ।
दुई साताअघिसम्म स्थिरजस्तै देखिएको नेप्से गत सातादेखि घटिरहेको छ । अधिकांश कारोबार दिनहरूमा घटेको नेप्से कहिलेकाहीँ बढ्ने गरेको छ । नेप्से बढ्दा वा घट्दा यसअघिको भन्दा धेरै कमको मात्र कारोबार हुँदै आएको छ भने घटबढको अंक पनि न्यून छ । यसको अर्थ बजारमा उत्साहित किसिमले कारोबार हुन सकेको छैन । यसैगरी बजारमा विभिन्न कम्पनीहरूको सेयर ९थप निष्कासन–एफपीओ० जारी गरिरहेका छन् । यसले पनि लगानीकर्ताको ध्यान त्यतातिर गएकाले दोस्रो बजार प्रभावित भएको जानकारहरू बताउँछन् ।
आइतबार करिब ४ हजार २ सय कारोबारबाट १ सय ६२ कम्पनका ७ लाख ८१ हजार ५ सय ६० कित्ता सेयर किनबेच भए । ती किनबेचबाट २५ करोड रुपैयाँ बराबरको सेयर कारोबार भयो । परिसूचक घटेपछि सेयर बजारको आकार ९कुल बजार पुँजीकरण० पनि घटेर १३ खर्ब ८४ अर्ब रुपैयाँमा सीमित भएको छ । उक्त दिन ट्ेरडिङ र होटलबाहेक सबै समूहका परिसूचक घटे । समाचार कान्तिपुरमा छ ।
भोलिको नेपाल बन्द के होला ? बिराटनगरबाट ९ जना पक्राउ
आइतबार दिउँसो विराटनगर महानगरपालिका कार्यालयमा बम विस्फोट गराएको आशंका प्रहरीले नौजनालाई नियन्त्रणमा लिएको छ।
अनुसन्धानका लागि प्रहरीले पक्राउ गरेका सबैको नाम गोप्य राखिएको छ। राजनीतिक आवद्धता र विगत गोप्य राखेर अनुसन्धान अगाडि बढाएको मोरङका प्रहरी प्रमुख डीएसपी निशान थापाले जानकारी दिए।
केही दिनअघि नेत्रविक्रम चन्द्र ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले महानगरसँग चन्दा मागरेको थियो। त्यसकै आधारमा विस्फोटमा नेकपाको संलग्नता रहेको आशंका समेत गरिएको छ। प्रहरीले भने यो विषयमा केही खुलाएको छैन।
बम विस्फोट भएको स्थानमा टिनका टुक्रा र धातु बाहेक अन्य केही कागजात फेला परेको छैन। बम विस्फोटपछि बसेको मोरङ जिल्ला सुरक्षा समितिको बैठकले सुरक्षा कडा पार्ने निर्णय गरेके छ।
आइतबार दिउँसो २ बजे महानगरका मेयर भीम पराजुलीको कार्यकक्ष नजिकै बम विस्फोट भएको हो। बम विस्फोटबाट मेयरको को १ झ ४९४ नम्बरको गाडी, कार्यालयको झ्यालका सिसा र दराजमा क्षति पुगेको छ।
विस्फोटपछि कार्यालयमा कर्मचारीको भागदौड चलेको थियो। भाग दौडका क्रममा कार्यालय साहायक शिवचन्द्र ठाकुर बेहोस् भएका छन्। उनको कोशी अञ्चल अस्पतालमा उपचार भइराखेको छ।
‘यो जनताको कार्यालय हो। कसले विस्फोट गर्यो भन्नेकुरा अनुमान गर्न सकिदैन’, मेयर पराजुलीले भने। मेयरको कार्यकक्षबाट प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको कार्यकक्ष जाने प्यासेजमा बम विस्फोट भएको हो। समाचार अन्नपूर्ण पोष्टमा छ ।
किन यसो गरियो ? चार जिल्ला घुमाएर प्रसूति
सुत्केरी व्यथाले च्यापेपछि बागलुङ–८ की सरस्वती जीसी शुक्रबार धौलागिरि अञ्चल अस्पताल पुगिन् । स्वास्थ्यकर्मीले चाररचार घण्टामा आउनु भनेर फर्काए ।
दिउँसो ४ बजे सामान्य अवस्था भनिए पनि बेलुकी ८ बजेदेखि उनलाई व्यथाले सताउन थाल्यो।
स्वास्थ्यकर्मीले प्रसूति कोठामा पठाएनन्। बाहिरै बस्न लगाए। साह्रै समस्या भएपछि जीसीले अनुनयविनय गरिन्। त्यसपछि बल्ल भित्र पठाइयो।
राति अबेरसम्म पनि उनले बच्चा जन्माउन सकिनन्। प्रसव पीडा सहनै नसक्ने भएपछि राति २ बजे पोखरा जानु भनेर स्वास्थ्यकर्मीले रेफर कागज बनाइदिए।
अस्पतालमा एउटा पनि एम्बुलेन्स थिएन। आफन्तले ट्याक्सी खोजेर पोखरा कुदाए। अविरल वर्षाले पर्वत र कास्की सीमा नजिकै पुग्दा ठूलो पहिरो खसेर बाटो अवरुद्ध थियो। जीसी छटपटाएर साह्रै भएपछि आफन्तले एम्बुलेन्सबाट उतारेर नजिकैको एक घरमा राखे।
पर्वतको भ्याप्ले खोलामा अलपत्र पर्दा जीसीकी दिदी पम्फा खडकाले जिल्लाका सांसदसहित धेरै जनालाई फोन गरेर सहयोग माग्दै हेलिकप्टर पठाइदिन गुहार मागिन्। मौसमको समस्या र रातको समय भएकाले त्यो पनि सम्भव भएन।
बिरामीको छटपटाहट कम नभएपछि राति नै फर्काएर पर्वत जिल्ला अस्पताल पुर्‍याइयो। अस्पतालकी प्रमुख डा। हेमा छन्त्यालले राति उठेर अपरेसन गर्ने तयारी गरिन्।
प्राविधिक कारणले अपरेसन हुन सकेन। अस्पतालमा बिरामीलाई चाहिने औषधि अभाव थियो। त्यसपछि डा। छन्त्यालले बिहान ४ बजे म्याग्दी जिल्ला अस्पतालका प्रमुख डा।रोशन न्यौपानेलाई फोन गरिन्।
सबै सामग्री तयार राख्न भनेपछि बिरामीलाई लिएर आफैं बेनी अस्पताल पुगिन्। बेनी पुगेको २० मिनेटमै अपरेसन सफल भयो। डा। छन्त्याल र न्यौपानेले जीसी र बच्चाको ज्यान बचाए।
चिकित्सकका अनुसार प्रसूति बेथा लागेको १० घण्टापछि गरिएको अपरेसनबाट दुवैको ज्यान बचाउन सकिएको यो जिल्लाकै नमुना घटना हो।
बागलुङस्थित धौलागिरि अञ्चल अस्पतालले बिरामीलाई पोखराको गण्डकी क्षेत्रीय अस्पतालमा रेफर गरेको थियो। कानुनी अधिकार नभए पनि डा। छन्त्यालले अपरेसन गर्ने निधो गरेकी थिइन्। ‘छटपटाएर मर्नुभन्दा प्रयास गरौं भनेर हामीले अधिकार दियौं,’ जीसीका श्रीमान् शंकरले भने, ‘उपचार हुँदैन भनेर समयमा जानकारी पनि पाएनौं।’
भारतीय सेनामा कार्यरत शंकर श्रीमतीलाई सुत्केरी बेलामा हेरचाह गर्न दुई साताको बिदा मिलाएर आएका थिए। आफ्नो जिल्लाको अस्पतालको बेवास्ताले एउटा बिरामीलाई चार जिल्ला घुमाएर प्रसूति गराउन बाध्य भएको उनले गुनासो गरे। यस्तो समस्या पर्दा धौलागिरि अञ्चल अस्पतालबाट सहयोग नपाएको जीसीका आफन्तले बताए।
धौलागिरि अञ्चल अस्पतालमा एक वर्षदेखि एनेस्थेसिस्ट, प्रसूति, अर्थोपेडिक र बालरोगसहितका १६ जना विशेषज्ञ डाक्टर अभाव छ। विशेषज्ञ नहुँदा जटिल अवस्थामा अपरेसन गर्न नसकिएको मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा। सागरकुमार राजभण्डारीले बताए।
‘विशेषज्ञ कोही आउँदैनन्, आएका पनि मन्त्री फेरिँदा फर्कन्छन्। कसरी सेवा दिने, म हैरान भएको छु,’ उनले भने, ‘कम्तीमा नभई नहुने विशेषज्ञ पठाइदिनुपर्‍यो भन्दा पनि वास्ता भएन।’
केही राजनीतिक पहुँच देखाएर फर्केको राजभण्डारीले आरोप लगाए। ‘अस्पतालमा आएका डाक्टरलाई बाहिरको अवसर पनि दिन्छौं तर राजनीतिक नेतृत्वले आउने वातावरण तयार गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘व्यवस्थापकीय काम गर्नुपर्नेमा आफैं तीनजना डाक्टरको काम गर्न बाध्य छु।’
अस्पतालमा आएका सामान्य प्रसूति, अर्थोपेडिक र बालरोगसहित कहिलेकाहीं ओपीडीसमेत हेर्न बाध्य भएको उनको गुनासो छ।
सिट संख्या थपेर प्राविधिक कलेज खोल्न पाइने भएकाले २०६७ सालमा बागलुङ जिल्ला अस्पताल अञ्चल अस्पतालमा स्तरोन्नति भएको थियो। ५० शय्याको बनाएपछि प्राविधिक कलेज पनि स्थापना भएको छ। तर, डाक्टर नआएपछि नौ वर्षदेखि बिरामी सास्ती खेप्दै आएका छन्।
अस्पतालमा २२ वर्षदेखि रेडियोलोजिस्ट छैनन्। सहायकस्तरका खड्गबहादुर थापा निरन्तर एक्लै एक्स–रेको काम गर्छन्। ‘वर्षौंदेखि बसेका कर्मचारीले कामै नगर्दा धेरै बिरामीको मनसमेत दुखेको छ,’ राजभण्डारीले भने।
करार सेवामा राखिएका स्त्रीरोग विशेषज्ञ डा। मञ्जु पाण्डे र अर्थोपेडिक डा। निरञ्जन अर्यालको म्याद थप नभएपछि अस्पतालबाट बाहिरिए।
कांग्रेसका गगन थापा स्वास्थ्यमन्त्री हुँदा अति आवश्यक सेवामा विशेषज्ञ डाक्टर आएका थिए। मन्त्री फेरिएको तीन दिनमै ती सबै विशेषज्ञ प्रमुख सहरका अस्पतालमा फर्केका थिए। कतिपय डाक्टरले प्रशासनलाई थाहासमेत नदिएको राजभण्डारीले बताए। समाचार कान्तिपुरमा छ ।
यस्तो छ वास्तविक कहानी निगम आर्थिक दल दलमा फस्नुको
सर्वोच्चमा मुद्धाको चापैचाप २१ हजार फछ्र्योट हुन बाँकी
कमजोरी कस्को ? निर्माणधिन १ हजार १ सय पुल बन्न बाँकी
यसरी सम्झीने भयो स्व. गिरिजा प्रसाद कोईरालालाई, संग्रहालय र अस्पताल निर्माण हुने
धर्तीको स्वर्ग खप्तडमा पर्यटन बोर्डका टोली
‘सिन्डिकेट’का कुरा गफमै अल्मलियो !